Soson-drivotry ny tany - Wikipedia
Soson-drivotry ny tany
Ny soson-drivotran'ny tany dia fonona entona (rivotra) misy manodidon'ny tany ahafahan'ny fiainana misy ary ny rano miranoka nohon'ny tsindry. Ny rivotra maina dia misy azôty (78,08%), ôksizenina (20,95%), argôna (0,93%), diôksida karbônina (0,039%) ary etona hafa. Ny soson-drivotran'ny tany dia miaro ny fiainana eto an-tany amin'ny alàlan'ny fanakanana ny tanamasoandro ankoatra ny volomparasy (UV). Ny hafanana dia tazon'ny soson-drivotra mba hanakely ny elanelan-kafanana mba tsy hangatsiaka loatra rehefa alina ny andro ary mba tsy hafana loatra rehefa mazava ny andro.
Ny soson-drivotran'ny tany
Tsy misy faritra mazava manasaraka ny habakabaka sy ny soson-drivotra. Ny tsindry atmôsferika dia mihakely arakaraky ny haabo isiana ary manjavona tsikelikely izy rehefa tonga any amin'ny 120 km any ho any, satria eo amin'io haabo io dia efa tsapa ny vokan'ny fikasohana amin'ny rivotra amin'ny sambondanitra manana hafaingana avo be (miditra ao amin'ny soson-drivotra avy any amin'ny habakabaka). Ny tsipik'i Kármán, any amin'ny haabo 100 kilometatra, dia matetika lazaina fa mamaritra ny habakabaka sy ny soson-drivotran'ny tany.
1 Ny soson'ny soson-drivotra
1.3 Sosona afovoany
1.4 Sosona ambany
1.6 Sosona hafa
2 Tondro fizika
2.1 Tsindry sy hatevezana
2.2 Fana sy hafaingam-peo
2.3 Hakitroka sy lanja
3 Fivoaran'ny soson-drivotry ny tany
3.1 Soson-drivotra voalohany
3.2 Soson-drivotra faharoa
3.3 Soson-drivotra fahatelo
Ny soson'ny soson-drivotraModifier
Habakabaka ivelany (> 10.000 km)
Ivelan-tsosondrivotra (800 - 10.000 km)
Sosom-pana (80 - 800 km)
(50 - 500 km)
Soson-drivotra afovoany (50 - 80 km)
Soson-drivotra ambany (11 - 50 km) Soson'ôzônina
Sosom-pikoriana(0 - 11 km)
Ny soson'ny soson-drivotra sy ny hafanana
Ny soson-drivotra fia manana sosona maromaro manana hatevina samihafa. Ny fetran'izy ireo dia napetraka araka ny fiovan'ny hafanana ary araka ny fiharon'ny rivotra. Eo ambany eo ny anaran'ny sosona, avy any amin'ny faritra ambany mankany amin'ny faritra avo.
Misy ny sosom-pikoriana (teny frantsay troposphère) : mihidina ny hafanana rehefa mihakatra any amin'ny haavo avo. Ny hateviny dia 8-15 kilometatra eo ho eo arakaraky ny faritany ara-toe-tany isiana (15 kilometatra any amin'ny fehibe ary 7-8 kilometatra any amin'ny tendrontany). Ao amin'io sosona io ny 90%-n'ny tontalin'ny lanja ny rivotra. Ao amin'io sosona io ny rahona no miforona.
Ny soson-drivotra ambany dia sosona "mafana" satria ny hafanana ao amin'ny stratôsfera dia mihakatra arakaraky ny haavo isiana. Izy io dia manomboka eo amin'ny haavo 8-15 km hatrany amin'ny 50 km ; ao aminy no misy ny ankabeazan'ny sosonan'ôzônina
Ny soson-drivotra afovoany dia sosona iray "mangatsiaka" : midina hatrany amin'ny -80 °C ny hafanana rehefa tafakatra any amin'ny 80 km. Ny mezôsfera koa dia toerana tetezamita anebaneban'ny Tany sy ny Habakabaja, ny meteôrita, ny zanabolana sy zavatra rehetra milatsaka eto an-tany avy any amin'ny habakabaka, dia voafanan'ny môlekiolan-ôksizenina vitsivitsy misy amin'io haavo io. Ny sambon-danitra dia tsy maintsy voaaro rehefa mandalo amin'io sosona io mba hahafahany tonga eto an-tany soa aman-tsara.
Ny sosom-pana : "soson-drivotra mafana" misy any amin'ny haabo 100 km. Izy io dia sosona manakana ny tanamasoandro ankoatra ny volomparasy (UV) amin'ny alàlan'ny atôman'ôkzizenina. Noho izany, ny hafanana eo amin'io sosona io dia 300 °C mety ho tafakatra any amin'ny 1600 °C arakaraky ny toetra ny masoandro. Noho ny hakely ny hakitroky ny zavatra, mitovy eo amin'ny 25 °C eo ho eo ny hafanana tsapa.
Ny ivelan-tsosondrivotra dia sosona farany an'ny soson-drivotran'ny tany. Ny hakitroky ny zavatra any amin'ny haavo 700 km dia 106 isaky ny santimetatra kioba ary midina any amin'ny 100 isaky santimetatra kioba izy any amin'ny haabo 5 000 km, ny hakitroky ny tontolo anelanelan'ny fajiry. Mihetsika am-pahalalahana ny atôma, ary misy sasany mandositra na very any amin'ny habakabaka.
Ny ivelan-tsosondrivotra dia tongoan-tsosondrivotra ivelany indrindran'ny tany. Izy io ia manomboka amin'ny tampon'ny sosom-pana hatrany amin'ny 10.000 km. Mifangaro amin'ny habakabaka ivelany izay tsy ahitana soson-drivotra ny ivelan-tsosondrivotra.
Ny ao amin'ny ivelan-tsosondrivotra dia ahitana hidirôzenina na dia vitsy aza izany. Ahitana heliôma ary môlekiola mavesatra toa ny azôty, ôksizenina, diôksida karbônina ny fetra ambanin'ny ivelan-tsosondrivotra. Tsy manana toetra toa ny etona intsony ny ivelan-tsosondrivotra ary mandositra any amin'ny habakabaka ivelany amin'ny alalan'ny rivo-masoandro ny atôma ao.
Ao amin'ny ivelan-tsosondrivotra no ahitana ny ankamaroan'ny zanabolana manodidin'ny Tany.
Tsindry sy hatevezanaModifier
Fana sy hafaingam-peoModifier
Hakitroka sy lanjaModifier
Fivoaran'ny soson-drivotry ny tanyModifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Soson-drivotry_ny_tany&oldid=964723"
Dernière modification le 14 Janoary 2019, à 12:46
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2019 amin'ny 12:46 ity pejy ity.